August 27, 2012 - Written by
Afgooye:-Wararka saaka naga soo gaaraya gobalka Shabellaha Hoose ayaa sheegaya in ciidamada DFS iyo kuwa AMISOM oo is garabsanaya ay duulaan ku qaadeen deegaano ka tirsan Gobolka Shabellaha Hoose waxaana ay ciidamada huwanta ah ay saaka ka dhaqaaqeen deegaanka NO.60 ;oo ay xarun weyn ku lahaayeen.
Dagaalka ayaa waxaa lagu soo waramayaa in uu ka socdo deegaanada lagu magacaabo Ceel Wareeg oo u dhaxeeya deegaanka Buufow iyo Shalanbood
Gudoomiyaha Gobolka Shabellaha Hoose C/qaadir Maxamed Nuur oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in saaka ciidamada DFS iyo kuwa AMISOM ay howlgalo ka sameeyeen deegaano ka tirsan Gobolka Shabellaha Hoose waxaana uu ku faanay in ay qabsan doonaa magaalada Marka saacadaha soo socda.
Halgan.net oo khadka tel kula xiriirtay goobjooge ku sugan magaalada Marka ayaa waxaa uu sheegay in magaalada ay degan tahay dagaalkana uu ka socdo deegaanada lagu magacaabo Ceel Wareeg oo u dhaxeeya deegaanka Buufow iyo Shalanbood.
Ilaa haatan ma jiraan cid ka tirsan Ururka Al-Shabaab oo faahfaahin ka bixiyey dagaalka ka socda deegaano ka tirsan gobalka Gobolka Shabellaha Hoose .
Wixii faahfaahin ah dib baan idiinka soo gudbin doonaa inshalaah.